Nepalistudio » वृद्धभत्ता सम्बन्धी निर्णय देउवाको अल्पवुद्धि हो, कांग्रेसलाई देउवाबाट जोगाऔं वृद्धभत्ता सम्बन्धी निर्णय देउवाको अल्पवुद्धि हो, कांग्रेसलाई देउवाबाट जोगाऔं – Nepalistudio
वृद्धभत्ता सम्बन्धी निर्णय देउवाको अल्पवुद्धि हो, कांग्रेसलाई देउवाबाट जोगाऔं
कांग्रेसभित्र देउवाका जब्बर समर्थक र आलोचक छन् । समर्थकहरु स्वार्थवश मात्र बनेका छैनन् होला, न त विरोधीहरु नै पनि आधारहीन आलोचना मात्रै गर्छन् । देउवाले पार्टी फुटाए, प्रजातन्त्र राजालाई वुझाए । तर, पनि देउवाले शंकाको लाभ पाए र जोगिए । कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले उनलाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बनाए ।
मलाई निर्वाचनपछि देउवाको नेतृत्वमा भैरहेका काम कारवाहीले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक धर्म जोगिन्छ कि जोगिँदैन यति मात्र बहस अगाडि बढाउने पिरलो भयो । प्रम र पार्टी सभापति ‘देउवा एण्ड कम्पनी’ जे गर्दैछन्, त्यो लोकतन्त्रसम्मत छ कि छैन ? कांग्रेसको मूल्यपद्दतिअनुरुप हो कि होइन ? यस विषयमा मात्रै अगाडिका विचार केन्दि्रत गर्नुछ ।
१४ माघ २०७४, आईतवार प्रकाशित